Hayi, andinanto ndingakuthengisela yona. Endaweni yoko, ndifuna ukukukhumbuza ngenyaniso enzulu osenokuba uyilibele: esona sixhobo sinamandla sokuthengisa ishishini lakho ngokufanelekileyo sesele unayo. Yeyona injini yecomputer iphambili kwihlabathi-eyakho ingqondo.
Umnxeba wokusebenzisa i-noggin yakho ngoyena siwuva ngalo lonke ixesha. Yile nto ithethwa ngabazali kunye nootitshala ebantwaneni, bathini abaphathi abakhathazekileyo kubasebenzi kunye nokuba abathengi abanomsindo babaxelela njani abathengisi babo. Ke isilumkiso esidala sokuCINGA sinokusinceda njani kwitekhnoloji yokuthengisa? Ukuphendula lo mbuzo, kufuneka sibuyele kwiziseko.
Nangona Martech Zone igcwele izimvo ezimnandi zokuphucula ukuthengisa kwi-Intanethi kunye neemveliso ezimangalisayo zotshintsho olwandayo, akubangakho ngxoxo ininzi malunga nokuba amagama athi "ukuthengisa" kunye "netekhnoloji" eneneni kuthetha. Ukubhala inkcazo yakho yindlela efanelekileyo yokucinga ngokucacileyo. Nantsi into endiyicingayo ngala mazwi:
Njengayo nayiphi na inkcazo, kuninzi kakhulu kumxholo kunala magama. Kodwa qaphela isicatshulwa endisisebenzisileyo: Intengiso imalunga nelelo, kanti iteknoloji imalunga isicelo. Oko kuthetha ukuba intengiso yinto ekufuneka uyibizile, i-corral kunye nedoli kwindawo elungileyo, apho itekhnoloji ingaphezulu ngokubeka iziqwenga ndawonye.
Ngaba uskena onke amakhadi eshishini ongena kwi-imeyile yakho yentengiso kwaye uqalise ukuthumela imiyalezo ngokukhawuleza? Ukuba kunjalo, oko kuthetha ukuba unenkqubo emnandi yokuqhubekeka amakhadi eshishini. Kodwa ndibheja ukuba amaxabiso akho avulekileyo asezantsi kwaye uhlala ungabhalisi. Kungenxa yokuba lonke ikhadi leshishini olifumanayo mhlawumbi ayi umele abaphulaphuli abafanelekileyo kwimveliso yakho. Usebenzisa isixhobo esikhulu kodwa nabantu abangalunganga.
Ngaba uya kwiminxeba yokuthengisa emnandi kunye nabagqatswa abomeleleyo kodwa ulibale ukulandela? Kuya kufuneka wenze urhwebo olugqwesileyo ukuze ufumane abo bantu, nokuba kungenxa yenethiwekhi, intengiso okanye eminye imithombo. Kodwa ukuba awukhathalelanga ukwenza umnxeba olandelayo ukuvala isivumelwano, awunayo inkqubo yokuthengisa ethembekileyo. Olona khokelo lukhulu emhlabeni alunantsingiselo ukuba awuzange utyikitye isivumelwano.
Kumsitho wonxibelelwano, uthembisa ngokundithumela ulwazi kamva ngala mini kodwa ungayibhali phantsi. Andizange ndive kuwe. ukusilela kobuchwephesha: awunayo ipatheni yamaxwebhu]
UAlbert Einstein uxelelwa ukuba wayekhe wathi "Iingxaki ezibalulekileyo esijamelana nazo azinakuconjululwa kwangumqondo ofanayo wokucinga okudala zona." Ukuba ufuna ukusombulula iingxaki zakho zetekhnoloji yentengiso, buyela kwiziseko zokucinga ngokucacileyo. Vavanya iinkcazo zakho. Chaza into oyenzayo engalunganga ukuze uqale ukwenza izinto ngokufanelekileyo.